Ukuthenga eKildare - IntoKildare
Izitolo, Ukuvakasha kokuqala, Izinto Ozozenza
Ukuze uthole isipiliyoni sokugcina sokuthenga, khohlwa ukupakisha ipasipoti yakho bese uzama ukufaka amabhodlela amancanyana e-lotion kwizikhwama ezivunyelwe yisikhumulo sezindiza ngaphambi kokugibela indiza eya eLondon noma eParis - iKildare yindawo entsha yokuthenga emephini nakho konke ongakufuna nokuningi.
IKildare Village Outlet
INurney Road, Co Kildare
I-hop emfushane, yeqa futhi yeqe ukusuka noma yikuphi e-Ireland, ngomgwaqo noma ngesitimela, iKildare inenqwaba yezitolo ezizokugcina wena kanye nesikhwama sakho semali nisebenza. Oyinhloko phakathi kwalaba, njengoba noma yimuphi umthengi we-savvy azi, yi IKildare Village Outlet enikela ngamalebula angumklami afinyelela kuma-60%.
Futhi njengoba ihlobo selisondele kithi akukaze kube nesizathu esingcono sokukhipha upulasitiki nokuvuselela ikhabethe lakho ngezingcezu ezimbalwa zomklami. Thatha ukubheka phambili kwezimfashini kuma-boutique afana no-Anya Hindmarch, uLulu Guinness noKate Spade, pimp out your feet at LK Bennett and Kurt Geiger, give your kitchen a splash of floral kitsch at Cath Kidston, pamper your bedroom at Bedeck or give your yokugezela lelo hhotela elizizwa eMolton Brown.
IKildare Village Outlet iguqule isipiliyoni sayo sokuthenga saba uhlobo lobuciko - isusa konke ukucindezela okuhambisana nokuthenga maphakathi nedolobha. Isitolo sesiqedile ukucasula okuyinhloko - izikhwama - ngokunikeza inketho engenazandla engu- € 5 lapho ukuthenga kwakho kuzoqoqwa khona kugcinelwe wena ehhovisi lezokwazisa uze ukulungele ukukulanda.
INewbridge, Co Kildare
INewbridge Silverware 8
Qiniseka ukuthatha uhambo oluya e- Isikhungo Sabavakashi seNewbridge Silverwarefuthi Museum of Izithonjana Zesitayela futhi. Umnyuziyamu, ogcina izingubo ezigqokwa izinganekwane zesikrini ezinjengo-Audrey Hepburn no-Elizabeth Taylor, kuzokhuthaza ukukhetha kwakho kwezemfashini. Bese uzitetemela ngezinye izingcezu zeNewbridge ezakhiwe kahle ezithengiswa kuma-Showroom.
Uma izimpahla zomklami kungeyona into yakho kunezinye izinketho eziningi zokuthenga eKildare. Thatha uhambo oluya e-WhiteWater Shopping Centre eseduze nezitolo okusetshenzwa kulengwa kuzo iDebenhams, M & S ne-H & M, kanye nabathengisi abahola phambili abangaphezu kuka-60 okubandakanya uKaren Millen, uZara noCarraig Don.
Craft Fairs & Abalimi Izimakethe
Uma uthanda ukuthungatha amatafula, iKildare igcwele izimakethe ukukhulisa isifiso sakho sokudla.
INaas Market Market yenzeka njalo ngoLwesihlanu ehholo ledolobha kusukela ngo-9.45: 12.15 ekuseni kuya ku-10: 6 ebusuku futhi inikela ngomkhiqizo omuhle wendawo, isinkwa, ujamu wobuciko, izimbali nemisebenzi yezandla. Thatha ukuzulazula uzungeze iCrookstown Craft Village, uvule uMsombuluko kuya ngeSonto kusuka ngo-XNUMX ekuseni kuya ku-XNUMX: XNUMX, bese ubuka abaculi bedweba, ababumbi emasondweni abo kanye nezinsimbi ezijikeleza intambo nokuklama izingubo ngazo zonke izinhlobo zezinto ezenziwe ngezandla ezithengiswayo.
Thatha izeluleko zethu - ngeke ukwazi ukukwenza konke ngosuku ngakho-ke bhuka igumbi kwelinye lama-B & B amaningi eKildare, amakotishi okuzenzela noma amahhotela kanokusho ukuze usabalalele ekwelashweni ngempelasonto futhi uvikele ukuzisola komthengi. O yebo, futhi ugqoke izicathulo ezintofontofo!
IzitoloUkuvakasha kokuqalaIzinto Ozozenza